Izimaphambili eziqhelekileyo kunye neZimamva kwiMeko yoNyango
NguBeverley Henderson, uJennifer L.Dorsey
Ukuba usaqala ukufunda isigama sonyango, isimaphambili kunye nesimamva yindawo elungileyo yokwazisa. Ewe zininzi izimaphambili zesigama sezonyango kunokuba ubona zidwelisiwe apha. Kodwa, ukuze uqalise, nalu ukujonga okukhawulezayo kwezinye zezimaphambili eziqhelekileyo ezidlala indima enkulu kuzo zombini, esiqhelekileyo isiNgesi nakwisigama sonyango.
I I- Ukunqongophala, ngaphandle, hayi
Ngembono ye- Ngaphambi, phambi okanye phambili
Ukulwa Ukuchasa okanye ukuchasa
Kunye Phinda kabini, zimbini, zimbini, zombini
Co-, con-, com- Kunye okanye kunye
Isuka- Phantsi, okanye ukusuka
Of- Kabini okanye ezimbini
Eyongezelelweyo-, eyongezelelweyo Ngaphaya, ngaphandle kwe, okanye ngaphandle
Hemi-, isiqingatha Isiqingatha, isiqingatha se
Hyper- Ngaphezulu, kugqithisile, ngaphaya
Hyp-, uhanahaniso Apha ngezantsi, ngaphantsi, kusilela
Infra- Ngezantsi okanye ngaphantsi
Ngena- Ngaphakathi, ngaphakathi
Intshayelelo Ukungena, okanye ngaphakathi
Encinci, encinci Incinci, incinci
Iposi Emva, okanye ukulandela, ngasemva
Ngaphambi, pro- Ngaphambi, ngaphambili, ngaphambili
Retro- Ngasemva, ngasemva
Tshintshela Ukugqitha okanye ukunqumla
Ultra- Ukugqithisa, ngaphaya
Isimamva, rhoqo esiphelweni segama, sihlala sibonisa inkqubo, imeko, okanye isifo. Ngelixa isimaphambili sikunika umkhondo kwinto onokuyilindela ngentsingiselo yegama, isimamva asitsali ngamanqindi kwaye sikuxelele okwenzekayo ngenxalenye ethile yomzimba okanye inkqubo. Kwaye, ngesiqhelo, ibandakanya okungalunganga kwezonyango okanye kubonise inkqubo esetyenzisiweyo ukuyixilonga okanye ukuyilungisa.
Ubungakanani beentsingiselo zesimamva banzi kakhulu. Njengezimaphambili, uninzi lwezi luneentsingiselo ezifanayo kwisalelo esidala, isiNgesi semihla ngemihla osivayo esitratweni. Umzekelo, isimamva -imitha ibonisa nje isixhobo esisetyenziselwa ukulinganisa into, njengoko isenza kwezinye iinkalo zezifundo. IJografi, igama elisoyikwa ngabaninzi bebanga lesihlanu kwihlabathi liphela, liphela ngoku -umfanekiso kwaye kuthetha inkqubo yokurekhoda.
-ac, -ic, -al, -ous, -tic Inxulumene, okanye ephathelene
-ite, -ize Kuxhomekeke ekusebenziseni
-ent, -er, -ist Umntu, iarhente
-i -genic Iveliswe ngu
-igrafu Ingxelo ebhaliweyo
-igrafu Isixhobo esisetyenziselwa ukurekhoda
-umfanekiso Inkqubo yokurekhoda
-kunye Isimo okanye ithiyori
-ingcali Lowo ufundayo, yingcali
-eology Ukufundwa, inkqubo yokufunda
Uvelwano Isifo, inkqubo yesifo
-phobia Ukoyika okanye ukunganyamezeli
Ubungakanani Isixhobo esisetyenziselwa ukujonga ngokungaboni
-iscopy Inkqubo yoviwo olubonakalayo
uthini umahluko phakathi kwe-oxycodone kunye ne-oxycontin
Ipilisi emhlophe e-oblong ip 190
cyclobenzaprine yeentlungu zangasemva
yintoni amayeza e-lisinopril
ngu-celexa an ssri
Ndibhengeza umdlalo wamakhadi emfazwe